ချစ်စရာအမှုအရာလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ချစ်စရာအမှုအရာလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
ဆောင်းယွန်းစံ ဟာ ဖြူ ဖွေး နုဖက် နေတဲ့ အသားရည် လေး တွေ အပြင် ဆွဲဆောင် မှုရှိ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဝတ် စား ဆင်ယဉ် မှု တွေမှာ လည်း ခေတ်ပေါ် ဖက်ရှင် လေး တွေ အပြင် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင် တွေကို လိုက်ဖက် မှု ရှိအောင် ဝတ်ဆင် တတ် တာကို တွေ့ရ ပါ တယ် … . မကြာခဏ ဆိုသလို ဆောင်းယွန်းစံ က ပရိသတ် တွေ အတွက် သူမရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေး တွေကို ဖော်ပြ ပေး ပါတယ် … .
ယခု တစ်ခါ မှာတော့ မင်းသမီး ဆောင်းယွန်းစံ က ပရိသတ် တွေ အသည်း ယားစရာ ဖြစ်လောက် မယ့် tik tok ဗီဒီယို လေးကို သူမ ရဲ့ လူမှုကွန် ယက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ တင် ပေး လာခဲ့ ပါ တယ် … .ကိုရီးယား မင်းသမီး တစ်ယောက် လို့ ထင်မှတ် ရ လောက် အောင် အလှ တရား တွေ ကို ပိုင် ဆိုင် ထား တဲ့ မင်းသမီးချော လေး ဆောင်းယွန်းစံ လေး က အနုပညာ လောက ထဲကို အကယ်ဒမီ ရွှေကြို အဖြစ် အားဖြည့် ပါဝင်ရင်း လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာ လမ်းခရီးကို အကောင်း ဆုံး လျှေက်လှမ်း လာ နိုင် ခဲ့တာ ကို တွေ့ရ ပါ တယ် … .
ဆောင်းယွန်းစံ က တော့ ဗီဒီယို ဇာတ် ကား တွေ ထဲမှာ လည်း ပါဝင် သရုပ် ဆောင် နေသလို photo Shooting တွေ ကို လည်း ရိုက်ကူး နေသူ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … . ဒါ့အပြင် အနု ပညာ နယ်ပယ် မှာ ပရိသတ် တွေ ချစ်ခင် နေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ် အောင် လည်း ကြိုးစား လုပ်ကိုင် နေ တဲ့သူ ပဲဖြစ် ပါ တယ် … .
ေဆာင္းယြန္းစံ ဟာ ျဖဴ ေဖြး ႏုဖက္ ေနတဲ့ အသားရည္ ေလး ေတြ အျပင္ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွတရား ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဝတ္ စား ဆင္ယဥ္ မႈ ေတြမွာ လည္း ေခတ္ေပၚ ဖက္ရွင္ ေလး ေတြ အျပင္ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ ေတြကို လိုက္ဖက္ မႈ ရွိေအာင္ ဝတ္ဆင္ တတ္ တာကို ေတြ႕ရ ပါ တယ္ … . မၾကာခဏ ဆိုသလို ေဆာင္းယြန္းစံ က ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ သူမရဲ့ ခ်စ္စရာ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ေဖာ္ၿပ ေပး ပါတယ္ … .
ယခု တစ္ခါ မွာေတာ့ မင္းသမီး ေဆာင္းယြန္းစံ က ပရိသတ္ ေတြ အသည္း ယားစရာ ျဖစ္ေလာက္ မယ့္ tik tok ဗီဒီယို ေလးကို သူမ ရဲ့ လူမႈကြန္ ယက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာ တင္ ေပး လာခဲ့ ပါ တယ္ … .ကိုရီးယား မင္းသမီး တစ္ေယာက္ လို႔ ထင္မွတ္ ရ ေလာက္ ေအာင္ အလွ တရား ေတြ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထား တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ေဆာင္းယြန္းစံ ေလး က အႏုပညာ ေလာက ထဲကို အကယ္ဒမီ ေရႊႀကိဳ အျဖစ္ အားျဖည့္ ပါဝင္ရင္း လက္ရွိမွာေတာ့ အႏုပညာ လမ္းခရီးကို အေကာင္း ဆုံး ေလၽွက္လွမ္း လာ နိုင္ ခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရ ပါ တယ္ … .
ေဆာင္းယြန္းစံ က ေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ ကား ေတြ ထဲမွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေနသလို photo Shooting ေတြ ကို လည္း ရိုက္ကူး ေနသူ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ဒါ့အျပင္ အႏု ပညာ နယ္ပယ္ မွာ ပရိသတ္ ေတြ ခ်စ္ခင္ ေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ေအာင္ လည္း ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ေန တဲ့သူ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ … .
Previous post အားလုံးက အချိန်အကြာကြီး မှားခေါ်နေကြတဲ့ သူ့ရဲ့နာမည် အရင်းကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း
Next post ဆက်ဆီကျတဲ့ အကလေးနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ကိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ ရှယ်ဗီဒီယိုလေး